Abazi lutho ngempilo yesimanje, futhi abanankinga
UKUTHEZA ngezinye zezinto ezixhumanisa abesifazane baseMakhabeleni KwaSenge bathole nendlela yokuchitha isizungu, lesi isithombe esiwumfanekiso wabesifazane abaphuma kotheza Isithombe: DOCTOR NGGCOBO /African News Agency(ANA)
UMA ucabanga impilo yowesifazane yesimanje, uba nesithombe somuntu ovuka ekuseni ageze aziphaqule, angene ezinkundleni zokuxhumana ezehlukene okubalwa uWhatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, tik tok nezinye.
Lokhu abesifazane bakwenza bephila emazingeni empilo angefani neminyaka engalingani ngoba nasebekhulile abangenazo izinkundla zokuxhumana banolwazi ngazo. Kodwa uma useKranskop, eMakhabeleni esigodini saKwaSenge, kunabesifazane abangazi nokuthi ukhuluma ngani uma ubala zonke lezi zinto futhi abangazihaleli nakancane ngoba abanalwazi ngazo.
Leli phephandaba libe nenhlanhla yokukhuluma nabanye besifazane bakule ndawo abaveze ukuthi izinhlelo zethelevishini abahlala befunda ngazo kwiSolezwe, abazi nokuthi kusuke kukhulunywa ngani ngoba abazibuki. Uma bevuka into yokuqala abayenzayo basheshisa imisebenzi yasendlini bahlukane phakathi abanye balibangise ehlathini beyotheza, abanye bayokha amanzi bese kuba khona nabayongena emasimini. Lena yimpilo abathi ibagcina bejabule futhi abaziboni beyohlala emalokishini nasemadolobheni ngoba ngeke besajwayela enye indlela yokuphila. Yize bengathanda ukuba nogesi amanzi, itiyela nezitolo ezinkulu kodwa indlela abaphila ngayo bayayithakasela ngoba ayibafaki ezindlekweni.
Owesifazane ozalelwe kule ndawo nongazange asiqede isikole ngoba ethole umendo uthe, yena nabangani bakhe bagaya idokwe bese besheshisa imisebenzi yasendlini balibangise emfuleni ekuseni baze babuye liyoshona nokuyinto ejwayelekile. Yilapho athe bathola khona ithuba lokuthamunda izindaba zabo zabesifazane nezomendo nokuyinto eyenzeka cishe zonke izinsuku. "Angikaze ngivakashe eThekwini, ngike ngizwe abanye bethi bayovakasha olwandle. Ngeke ngisayijwayela enye impilo ngoba sengijwayele ukuvuka ekuseni ngiyocosha izinkuni zokupheka, ngiyokha amanzi ngihlangane nabanye omama," kusho lo wesifazane.
Omunye uveze ukuthi yize esewumakoti omncane kodwa naye uyayijabulela impilo yasemakhaya nokuhlala nomamezala. Inkonzo yasekamelweni uthi kuyenzeka nayo ayithole kanye noma kabili ngonyaka uma kubuye umyeni futhi akanankinga. "Umyeni wami kuyenzeka kucishe kuphele unyaka engabuyanga ekhaya kodwa angibi nayo inkinga ngoba ngisuke ngihleli nomamezala. Angisizwa isizungu ngoba senza imisebenzi yasekhaya uma ezovakasha naye ufica konke kulungile ekhaya,"kusho lo wesifazane
UKUCHITHA isizungu nokulandela osaziwayo sekwaba impilo yansuku zonke kubantu kodwa kukhona indawo enabantu okubalwa nabesifazane abangazi lutho ngezinkundla zokuxhumana Isithombe: BONGIWE ZUMA
Omunye uveze ukuthi selokhu azalwa akakaze asebenzise iziphaqulo futhi nesidingo sazo akasiboni ngoba akuyona into abayisebenzisayo. Into ehamba phambili neyenza isikhumba sowesifazane ikhazimule abe muhle kule ndawo, yibomvu eligcotshwa ekuseni kusaphuma ilanga lize ligezwe seliyoshona. "Isikhathi esiningi sihlala ehlathini nasemfuleni, asibi nesikhathi sokuhlala endlini singenzi lutho. Ngesikhathi sokutshala singena emasimini siligcobile, siyokha amanzi siligcobile noma siyotheza liyasivikela elangeni. Angiboni ukuthi ngingajwayela ukugcoba le zinto ezigcotshwayo,“ kusho lo wesifazane.
Izitayela zemfashini yize zikhona futhi zingena zidedelana ezitolo kodwa abaningi besifazane bakule ndawo bakhonze iziketi namaphinifa kulaba asebekhulile nabaganile. Omunye utshele leli phephandaba ukuthi selokhu azalwa akakaze aligqoke ibhulukwe futhi ukhule lingagqokwa nakubo. "Angikakaze ngizibone ngigqoka ibhulukwe, sezikhona izingane ezincane eziswenka ngawo kodwa mina ngeke ngaligqoka noma kungabanda kanjani ngifaka amasokisi okungcono. Into engiyithandayo ukuvunula, ngiyazizwa ngisho ngihamba, nanamhlanje ngiyazisola ukuthi ngigqokeleni kanje bekufanele ngivunule ngoba kunezivakashi," kusho owesifazane.